Soodejiye Instagram - Soo dejiyaha instagram-ka weyn
Si aad uga soo dejiso instagram ku dheji ciwaanka isku xirka fiidyowga instagram-kaaga, sawir, igtv, sheeko, reel oo dhagsii badhanka soo dejinta
Sidee looga soo dejisan karaa instagram?
Si aad uga soo degsato insta waa inaad sameysaa talaabooyinka hoose.
In instagram guji macnaha guud (3 dhibic) oo ku dhufo "copy link". menu-ka macnaha guud waa ikhtiyaar leh astaan ​​saddex-dhibic ah oo ku taal dusha sare ee qoraallada iyo sheekooyinka. In igtv doorashadan waxay ku taal salka hoose ee bogga.
Ku dhaji goobta cinwaanka insta
Ku dheji xiriiriyaha la soo guuriyey ee ku yaal aagga cinwaanka ee dusha sare ee boggan oo dhagsii badhanka soo dejinta. Waad ku dhejin kartaa url Ctrl + C ama ku hay garoonka oo guji xulashada dhejinta.
Fiidiyowga ama sawirka aad rabto wuxuu diyaar u yahay inuu soo dejiyo. Waad soo dejisan kartaa adiga oo gujinaya badhanka soo dejinta. Waxaad ka arki kartaa horumarka soo dejinta adigoo u maraya barta ogeysiinta oo aad arki karto feylka ka dib markii soo dejintu dhammaato.
Ku saabsan soo dejiyaha instagram
Soo dejiyaha instagram-ka vidiget waa aalad bilaash ah oo degdeg ah oo laga soo dejiyo Instagram. Instagram ma ogola isticmaalayaasha inay soo dejiyaan waxa ku jira oo ay arkaan offline. Qalabkani waxa uu awood kuu siinayaa inaad soo dejiso fiidiyowyada Instagram, sawiro, sheekooyin, igtvs iyo reels wakhtiga ugu gaaban.
Si aad u soo dejiso, kaliya koobiyayso xiriirka boostada ama isku xirka igtv ama isku xirka sheekada Instagram ka dabadeed geli goobta ciwaanka ee sare ee bogga.
Soo dejiyaha instagram-ka vidiget waa aaladda ugu dhamaystiran uguna awooda badan ee laga soo dejiyo Instagram waayo waxa ay taageertaa dhamaan noocyada kala duwan ee ku jira Instagram-ka sida sawirada, fiidyaha, sheekooyinka, igtv, reels waxa kale oo ay la jaanqaadi kartaa cusboonaysiinta amniga Instagram-ka cusub.
Tilmaamaha soo dejiyaha instagram-ka Vidiget
soo dejiso sawir instagram
awoodda lagu soo dejiyo sawirada boostada Instagram
soo dejiso fiidiyow instagram
awoodda lagu soo dejiyo fiidiyowyada Instagram
instagram igtv soo dejiso
awoodda lagu soo dejisan karo Instagram igtv
soo dejiso sheeko instagram
awoodda lagu soo dejiyo sheekooyinka Instagram
instagram soo dejiso reel
awoodda lagu soo dejisan karo reels Instagram
Soo dejin tayo sare leh
vidiget waxa ay soo bandhigaysaa faylal muuqaal ah oo leh tayo iyaga u gaar ah
gabi ahaanba bilaash ah
vidiget instagram soo dejiyaha fiidyaha gabi ahaanba waa bilaash